सास गन्हाउने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी मुक्त हुनोस् - Everest Dainik - News from Nepal
डा. भागवत भट्टराई
मुख स्वास्थ्यले हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । गोरो वर्ण, सुन्दर अनुहारले मात्र व्यक्तिको व्यक्तित्व झल्काउँदैन । त्यसका लागि व्यक्तिको मुख स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । मिलेका दाँत भएरमात्र मुख स्वास्थ्य राम्रो छ भन्न सकिँदैन । त्यसका लागि दाँतसँंगै सास गन्हाउने समस्या हुनु हुँदैन ।
कुनै मानिसको छेउमा बस्दा मुखबाट ह्वास्स नराम्रो गन्ध आयो भने तपाईं जतिसुकै सुन्दर भए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । मानिसहरू तपाईंको नजिक आउनै चाहँदैनन् । त्यसैले स्वास्थ्यका लागि मात्र नभएर व्यक्तित्व विकासका लागि पनि मुख स्वास्थ्यमा ध्यान दिनै पर्छ । धेरै जनाको सास गन्हाउने समस्या हुन्छ ।
त्यो समस्याले उनीहरूलाई समस्यामा पारेको हुन्छ । यो समस्यालाई निराकरण गर्न सकिन्छ । यो समस्यालाई समस्या नै नठान्नुभन्दा यो समस्याबाट मुक्त हुने घरेलु उपाय र दन्तरोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ । सास गन्हाउने समस्यालाई दन्तहर्ष पनि भनिन्छ । सास गन्हाउने विभिन्न कारण हुन्छन् ।
सास गन्हाउने प्रमुख कारणहरू :
१. खाना अड्केर कुहिएर
२. जिब्रोको माथिल्लो भाग बारम्बार सफा नगरेमा ।
यदि शरीरमा अन्य समस्या नभएमा मुखको उपचार र खानपानमा ध्यान दिन सके सास गन्हाउने समस्याबाट बाच्न सकिन्छ । हामी शरीरका अन्य भागको उपचारमा ठूलो धनराशि खर्च पछि पर्दैनाै ।
तर मुख र दाँत स्वास्थ्यलाई खासै महत्व दिने गरेका हुँदैनौं । जबसम्म हामी दाँत र मुख स्वास्थ्यलाई महत्व दिएर ख्याल गर्दैनाैं । तबसम्म सास गन्हाउनेजस्ता समस्यामात्र नभएर मुख र जिब्रोको क्यान्सरबाट बाँच्न सक्दैनौ । सास गन्हाउने समस्या जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि हुन सक्छ ।
त्यसैले साना नानीहरूलाई सानै उमेरदेखि कुल्ला गर्ने, दाँत माझ्नेलगायतका बानी बसाल्नु आवश्यक छ । सास गन्हाउने समस्याबाट बच्न हामीले यी कुरामा ध्यान दिनै पर्छ ।
७. सास गन्हाउने समस्या समाधानका लागि दन्त रोग विशेषज्ञसँग उपचार र परामर्श गर्नुपर्छ ।
( भट्टराई, शिवपुरी डेन्टल, महाराजगन्जमा गिजा रोग तथा कृत्रिम दन्त जरा प्रत्यारोपण विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत छन् । ) हेल्थ नेपाल टुडेबाट
ट्याग्स: Mouth Smell